OweGagasi ethubeni lokwethula i-Expresso
UMSAKAZI weGagasi FM uZisto uqokelwe kwiTop 10 yababanga isikhala sokuba ngumethuli we-Expresso kuSABC 3 Isithombe: INSTAGRAM / ZISTOLIVE
FANELESIBONGE BENGU | August 23, 2019
UMSAKAZI weGagasi FM uThandi “Zisto” Mhlongo, uthi akazi uzomisa kanjani emsakazweni uma edla umhlanganiso emncintiswaneni iPresenter Search on 3: Expresso Edition.
UZisto wenza uhlelo The Mid Morning Hangout ngo-9- kuya ku-12 emini phakathi nesonto noKhulekani Mbambo. Ungenele lo mncintiswano wokubheka abethuli abasha ababili bohlelo lwakuSABC3 i-Expresso. Okwenzeka kulo mncintiswano kukhonjiswa ohlelweni oludlala ngo-7.30 ebusuku ngoLwesithathu kuSABC3.
Kuleli sonto isiqephu besikhombisa inhlolokhono yaseThekwini. Kubantu abebengenele ku-Instagram, kuthathwe abangu-50 ukuthi bayohlolwa ngamajaji ayizimenywa obekukhona kuwo umsakazi woKhozi FM, uSelby Mkhize, Stacey Norman nomlingisi woZalo uNkanyiso “Njeza” Makhanya.
Kudlulele phambili abangu-15 ukuthi bayozama inhlanhla baphinde bazame ukuchaza amajaji ohlelo uThando Thabethe noRoger Goode. Yilapho kuthathwe khona uZisto yedwa ofakwe kwiTop 10 osezobanga nabakwezinye izindawo. UZisto uthe akazi kuzokwenzekani manje, uzobona khona.
“Angazi kwenzeke kanjani, uma kuyisikhathi sakho yisikhathi sakho. UNkulunkulu. Angazi nokuthi ngizomisa kanjani emsebenzini uma kuthiwa ngiyathathwa. Kusho ukuthi ngizosakazela eKapa lapho okuzomele ngithuthele khona,” kusho uZisto.
Uthe ukholwa ukuthi abantu sebeyalazi iphimbo lakhe manje sekuyisikhathi sokuthi bazi nobuso. Uthe ucabanga ukuthi okwenze kwaba lula kwinhlolokhono yakhe yingoba unesiteshi sakhe seYou Tube lapho ethula khona uhlelo iDeeply Rooted DBN oluhambela imicimbi ehlukene eThekwini.
“Yilapho engiqeqesheke khona ngoba ngesikhathi senhlolokhono bese ngazi ukuthi ngenzeni phambi kwekhamera. Abantu kumele bazisebenzise izinto ze-internet ngoba iziteshi ezinjengeSABC azinayo imali yokuqasha kodwa uma ufika nomsebenzi wakho kubo bangakukhokhela kahle.”
Abakholwa ukuthi uzikhungile ona-9
Bamgxobe wafa umfundi kubangwa intombi
Inkosikazi kaMalema ithathele uMamabolo izinyathelo zomthetho